Uyenza njani iMbali yeHockey League
Ukuba unabahlobo abaninzi abathanda i-NHL (i-National Hockey League) njengokuba usenza, ukwenza iligi yokudlala kunye nabahlobo bakho kubiza ixabiso eliphantsi kunexesha elidlulileyo kwaye kukuvumela ukuba uphephe umhlaba oxakekileyo kwimidlalo ye-Intanethi emnandi .
Ityala: © iStockphoto.com / Aksonov
La manyathelo alandelayo aya kukunceda ekukhokeleni xa usenza iligi kunye nezihlobo zakho onokuyonwabela.
Inyathelo loku-1: Thatha isigqibo sokuba ngubani ophumeleleyo nolahlekileyo oza kufumana.
Chonga ukuba yeyiphi na eya kuphumelela (elona lungu likwinqanaba eliphezulu kwiligi) eya kuphumelela kwaye yintoni eya kuphulukana nayo (elona lungu liphambili leligi) kuya kufuneka ayenze. Ukugcina izinto zinomdla, uninzi lweligi zabucala zibonelela ngendebe kunye nohlobo oluthile lwebhaso okanye kwanokuqhayisa ngamalungelo ophumeleleyo.
Olahlekileyo ke uhlala enyanzelekile ukuba enze isenzo esithile sokuthotywa njengesohlwayo senqanaba lokugqibela kwiligi. Amabhaso ayahluka kumakhadi ezipho, iimbiza zemali, kunye nezipho ze-gag. Olahlekileyo anganyanzelwa ukuba enze izinto ezinje ngokutya into ecekisekayo okanye ahlawule isohlwayo embizeni yemali-amathuba anokuphela.
Gcina ukhumbula ukuba xa unikezela ngembiza yemali, kufuneka ubize imali yokungena. Imali yokungena iya kuchaza ubungakanani bebhaso lemali ekupheleni kwesizini.
Khetha isohlwayo esingekho mthethweni! Umzekelo, sukumenza olahlekileyo abaleke eze ze ezantsi kwisitalato esikhulu. Endaweni yokuba ukhethe umsebenzi ofanelekileyo, kodwa uthob 'isidima, njengokuphulukana nokunxiba iimpahla ezihlekisayo kwivenkile yokutya.
Inyathelo 2: Chonga ubungakanani beqela kunye nemigaqo yoyilo.
Ubungakanani beqela lithatha isigqibo sokuba kuya kuba nzima kangakanani ukulandela iligi. Iiligi ezisemgangathweni ziqhuba amaqela anabadlali abali-15-18. Uluhlu oluqhelekileyo lubhalwe ngolu hlobo lulandelayo:
Amaphiko ama-2 asekhohlo
2 Amaphiko Asekunene
Iinjongo ezi-2 / Abaxhasi
3-6 Bench / Utility slots (nasiphi na isikhundla siyafaneleka)
2 vula indawo yokusebenzela eluncedo yolondolozo
Ukuba ulandela iligi yefomathi esemgangathweni, emva koko uyakwenza uluhlu olubandakanya iindidi ezingaphambili. Nangona kunjalo, amaqela amaninzi abucala ayathanda ukuyisusa ibhentshi ukuphelisa isidingo sokujikeleza komdlali.
i-prednisone yezinja zedosi
Emva kokumisela ubungakanani bamaqela ofuna ukuba iligi yakho iwasebenzise, ​​kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukuthengisa. Ukuba uthatha isigqibo sokuvumela urhwebo, kuya kufuneka ke uchonge ukuba mangaphi na amashishini eligi yakho eya kuthi ivumele ixesha lonyaka. Khetha umhla kunye nexesha oya kuthi uvumele urhwebo ukuba lwenzeke kwaye ulubandakanye kumgaqo wepakethi owunikezela kumalungu eligi yakho.
Inyathelo lesi-3: Chonga iodolo amalungu aya kuthi akhethe abadlali bawo.
Gcina ukhumbula ukuba ukuvumela ilungu elinye ukuba likhethe bonke abadlali beqela lakhe ngexesha elinye akulunganga. Jikelezisa izinto ozikhethileyo ngomnini weqela ngalinye ukuze ilungu ngalinye likhethe umdlali omnye ngexesha de kugcwaliswe zonke iindawo ezikhoyo.
Emva kokumisela indlela abadlali abaza kuthathwa ngayo, kufuneka usete ikepp yomvuzo kuwo onke amalungu akho weligi kwaye ubeke ixabiso lomvuzo kubo bonke abadlali abakwi-NHL.
Abadali beligi elungileyo (abakhomishinala) bayila kwaye banikezela ngee-cheats sheet kumalungu eligi ukunceda ukuhambisa uyilo ngokukhawuleza.
Inyathelo 4: Chonga iindidi zokufumana amanqaku kunye nohlobo.
Inyathelo elilandelayo kukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi ifomathi yomdlalo ofuna ukuba iligi yakho isebenzise. Iligi ye-4 x 4 ingasebenzisa izibalo ezi-4 zokuzikhusela / zegoli kunye nezibalo ezi-4 ezihlaselayo. I-2 x 2 x 2 yeligi inokusebenzisa izibalo ezi-2 zokuzikhusela, izibalo ezi-2 zamagoli, kunye nezibalo ezi-2 ezihlaselayo njalo njalo.
Inombolo yefomathi ayimiseli ubungakanani beqela kodwa igqiba ukuba zingaphi izibalo umdlali ngamnye afanele ukukorwa kuzo. Inani eliphantsi, kuya kuba lula ukufumana amanqaku kwiqela lakho ngokufanelekileyo.
Emva kokumisela ukuba zeziphi izibalo ofuna ukuzenza amanqaku, kuya kufuneka unqume ukuba ufuna njani ukulinganisa amanqaku kwezo zibalo. Ukuba uyayithanda inkqubo yokuphumelela / yelahleko, thatha isigqibo sokuba uyafuna na ukuyiphumelela / ukuphulukana nefomathi enye yokuphumelela okanye ukuphumelela / ukulahleka kuzo zonke iindidi zefomathi. Ukuba ukhetha ukusebenzisa inkqubo yamanqaku, kuyakufuneka wenze uluhlu lweenkcukacha-manani ofuna ukuzisebenzisa kunye nokuseta amaxabiso amanqaku kumthetho ngamnye.
Inyathelo 5: Gqiba ixesha leligi.
Emva kokuba uwalandele onke amanye amanyathelo, kuya kufuneka uqonde ukuba iligi yemihla ngemihla okanye yeveki iya kufaneleka ngakumbi. Ngeligi yemihla ngemihla wena kunye nawo onke amanye amalungu weligi kuya kufuneka ninxibelelane mihla le ukwazisa ujikelezo lomdlali kwaye uthumele amanqaku akho okanye uphumelele / ilahleko kwiphepha lamanqaku oluntu. Iligi yeveki nganye iya kwenza ngendlela efanayo, kodwa ngeveki ngokuchaseneyo nemihla ngemihla ngalo lonke ixesha lonyaka.
Ukuba ufuna ukuzama iligi kodwa ungafuni ukutyala iinyanga zexesha kwifomathi yefomathi epheleleyo, ungasoloko usenza iligi yefomathi ebonakalayo apho unciphisa khona izibonelelo zomdlali, amanqaku afunyenwe kunye nemihla edlalwayo. Unokudala iligi ebonakalayo ukubonisa ukuba unokuhlala kuphela impela-veki enye okanye ngokudlala nje ixesha lokudlala.
Lo mdlalo ubhetyebhetye ngokweendlela zokudlala. Ungasebenzisa nayiphi na imigaqo esemgangathweni okanye akukho namnye kuyo; ukhetho luxhomekeke kuwe.
iso iso lihla iziphumo ebezingalindelekanga
Umthamo weTylenol wabantwana abancinci
d & d 4e nqanaba phezulu
iziphumo ebezingalindelekanga zeMedroxypr
idepakote ziziphumo ebezingalindelekanga
ungathatha i-aleve nge-ibuprofen
iziphumo ebezingalindelekanga ze-dextrose